Natiijada dugsiyada madaxa bannaan iyo kuwa degmada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Natiijada dugsiyada madaxa bannaan iyo kuwa degmada
La daabacay torsdag 26 maj 2016 kl 14.19
sawir: Filip Gustafsson Högman/Sveriges Radio
Arddeyda dhigata dugsiyada sare ee goonida loo leeyahay natiijo liidata ayey ka soo hooyaan imtixaanka qaran, sidas waxaa muujinaya daraasad ay arrintan ku samaysay hey’adda dowliga ah ee IFAU.
Daraasadan ayaa sidoo kale muujineysaa in iskuuladan goonida loo leeyahay imtixaanada u saxaan si deeqsinimo ku jirto.
Valetina Badri oo ah ardey dhigatada dugsi sare oo ku yaala Stockholm ayaa mardhow ka soo baxday imtixaanka qaran ee xisaabta.
– Dabcan waa arrin xaq daro ah oo laga naxo in arddeyda natiijadooda imtixaanka siyaabo kalo duwan loo qiimeeyo, ayey tiri.
Daraasad ay sameysay rugta qiimeysa siyaasadda suuqa shaqada iyo waxbarashada ayaa loogu kuurgalay 48 000 oo ah imtixaanada qaran ee dugsiga sare maadooyinka aas’aasiga ah sida af-iswiidhishka, ingiriiska iyo xisaabta.
Arddeyda dhigata iskuulada goonida loo leeyahay ayaa markey u fariistan imtixaanada qaranka waxay ka soo hooyaan natiijo ka hooseysa marka loo barbardhigo arddeyda dhigooda ah ee dhigata dusgiyada degmooyinka leeyahiin. Farqiga ugu weyn waxuu ka jiraa arddeyda dhigatada barnaamijyada diyaarinta xirfadaha ee ka soo jeeda qoysaska aan laheyn tacliin sare.
Inkastoo Farqiga marka si loo fiiriyo uusan sidaas u balaarneyn hadana waa mid cad, sida uu leeyahay Jonas Vlachos oo ah barofesor dhaqaalaha ka dhiga jamacadda Stockholm
– Iskuulada goonida loo leeyahay iyo iskuulada degmada waxay arddeyda siiyaan barnaamijyo isku mid ah, maagelinta ay helaan na waa isku mid. Mabda ahaan waxay aheyd in natiijadooda isku si u wanaagsanaato, ayuu yeri.
Cilmibaarayashaa waxay isku barbardhigeen imtixaan saxidda iskuulada iyo dib u saxidda imtixaanada ay ku sameyso hey’add kormeerka iskuulada. Is-barbardhigana waxuu muujiyey in iskuulada goonida loo leeyahay ay deeqsi ku yahiin markey timaado qiimeynta imtixaanada arddeydooda marka loo barbbardhigo iskuulada degmooyinka leeyahiin, farqiga dhibcanaha u dhaxeeyaana waa 0,4. Iyadoo farqiga weyna uu sidoo kale ka jiro barnaamijyada sii wadashada waxbarashada.
Turjumaada laga qaadan karo natiijada daraasadan waxay tahay in iskuuladda goonida loo leeyahay ay sameeyaan waxa addeydooda dooneyso. Sida uu qabo Jonas Vlochos.
– Arddeyda dhigatada barnaamiyada sii wadashada waxbarashada waxay mar kasta rabaan shahaadooyin sare,iskuulada goonida loo leeyahayna way u sameeyaan sida ay arddeydan dooneyso, taas oo laga arki karo marka la fiiriyo saxitaanka imtixaanada, ayuu yeri.
Theodor Elfström oo ah arddeyd dhawaan dhameyn doona dugsiga sare ayaa ka cabsi qaba in farqiga iskuulada u dhaxeeya in uu saameyn ku yeesho sii wadashada waxbarashadiisa heer jaamacadeed.
– Haddii aan dhigan lahaa iskuul gooni loo leeyahay markas waxaa suurogal aheyn laheyd in aan ka helo shahaado ka sii wanaagsan midda hadda heli doono, taas oo ii suurogelin laheyd in aan soo galo waxbarashada iyo jaamacadaha ay adagtahay in la soo galo, Handels iyo Uppsala, ayuu yeri.